Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: June 2009
- ပေါ့ပ်အဆိုကျော် မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင် ကွယ်လွန် link
- ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ကွယ်လွန် link
- မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင် အသက် (၅၀) အရွယ်တွင် ကွယ်လွန် link
- မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ သီချင်းအချို့ link
The phenomenal success of his album 'Thriller', released in 1982, established him as one of the most influential solo artists of the 20th century.
Posted by yahutha at 3:28 PM0comments
It is thought the tunnels under Nay Pyi Daw could have been built with the help of experts from North Korea.
Posted by yahutha at 3:18 AM0comments
- သံသယရှိဖွယ် မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည် link
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော မြန်မာပြည်တွင် ဆိုက်ကပ်မည်ဟု ယူဆရ link
- သံသယရှိဖွယ် မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည် link
- မြန်မာပြည်သို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်နေဟန်ရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော link
- မြန်မာသို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်းနေသည့် မြောက်ကိုးရီးယားသင်္ဘောအား ယူအက်စ်ဖျက်သင်္ဘောက နောက်မှ ကပ်လိုက် link
Democracy & Peace Award ကို ကိုယ်စားလက်ခံရယူခဲ့သူတဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
NLD MTHK tw23
Posted by yahutha at 2:11 AM0comments
Posted by yahutha at 5:48 PM0comments
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် မှ အရှင်သောပါက၏ ဒေါ်စုမွေးနေ့ ရောမမြို့ ဆုတောင်းပွဲ။
အရှင်သောပါကနှင့်ဒီမိုဝေယံတို့ မှပေးပို့ ပါသည် ၊၊
Posted by yahutha at 5:46 PM0comments
Posted by yahutha at 2:00 PM0comments
Posted by yahutha at 1:20 PM0comments
Posted by yahutha at 1:19 PM0comments
Posted by yahutha at 1:18 PM0comments
ဒီကနေ့ ဗဟိုတရားရုံး NOTICE BOARD မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်သေ ၂ဦး အတွက် ဗဟိုတရားရုံးမှာ နှစ်ဘက်ရှေ့နေများ လျှောက်လဲရမည့် ရက်ချိန်း ကို ၂၄ ရက်နေ့သို့ သတ်မှတ် ပေးထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Posted by yahutha at 1:35 AM0comments
မနက်ဖြန် မှာပြုလုပ်မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံး အစီအစဉ်များ။....။
မနက်ဖြန် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင် နေကြပါတယ် ။
အခမ်းအနား အစီစဉ် တွေကတော့ ........
၁...မနက် ၅း၃၀ မှာ သံဃာတော်များအား မွေးနေ့ အာရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါမယ်။
၂....၁၀နာရီမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်စူးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဂျိးဖြူများ လွှတ်ပါမယ်။
၃... ဆုမဲ ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀၀ ပါတဲ့ မွေးနေ့ မိုးပျံဗူဘောင်း များလွှတ်တင်ပြီး ကံထူးရှင်ဟာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၄...နေ့လည် ၁နာရီမှာ ရန်ကုန်တိုင်း NLD မိသားစုများရဲ. ပညာရေး ထောက်ပံကြေး ပေးအပ်ပွဲ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။.....။ သတင်း။.....ဒီမိုဝေယံ...
Posted by yahutha at 1:21 AM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား....
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ လျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေး link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာ link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ရန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း (၁၀၀) ကျော် တောင်းဆို link
Posted by yahutha at 2:59 PM0comments
Singer, songwriter, pianist Tomoe Sawa tells Burma's democracy leader Aung San Suu Kyi, "please do not give up hope, because you're the hope youself."
Mizuho Fukushima, MP (House of Councillors) and leader of the Social Democratic Party of Japan, calls for the release of Burma's democracy leader Daw Aung San Suu Kyi.
"64 For Suu"message from Azuma Konno, MP (House of Councillors, the Diet of Japan), calling on Nobel Prize laureates to speak out for the release of Burma's democracy leader Daw Aung San Suu Kyi.
"64 For Suu"message from Azuma Konno, MP (House of Councillors, the Diet of Japan), calling on Nobel Prize laureates to speak out for the release of Burma's democracy leader Daw Aung San ...
ロック歌手のサンプラザ中野くんから、アウンサンスーチーさんへの「６４メッセージ」が届きました。「６４キャンペーン」は、ビルマの民主化リーダーでノーベル平和 賞受賞者のアウンサンスーチーさんの64歳の誕生日（6月19日）に合わせ、動画や画像、文、Twitterなどを使ってスーチ ーさんの解放を求め、スーチーさんを応援する「６４語のメッセージ」を送ろうという企画です。世界の政治、音楽、...
衆議院議員で「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」事務局長 の末松義規さんから、アウンサンスーチーさんへの「６４メッセー ジ」 が届きました。 「６４キャンペーン」は、ビルマの民主化リーダーでノーベル平和 賞受賞者のアウンサン スーチーさんの64歳の誕生日（6月19日）に合わせ、動画や画 像、文、Twitte rなどを使ってスーチーさんの解放を求め、スーチーさんを応援す る「６４語のメッ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲနှင့်ဇီဝိတဒါနငါး လွှတ်ပွဲ
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(၆၄)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး
နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲအား L.D.B မှဦးဆောင်၍ (JAPAN-SHIZUOKA)ရှိ
(GORTANBA)ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီတွင် တိုကျို၊နာဂိုယာရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများမှ လွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲအားကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ။
Posted by yahutha at 11:03 PM0comments
AAPPဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲမှဦးစီး၍ဂျပန်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့်ပူးတွဲ၍သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲvideo (3)
AAPPဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲမှဦးစီး၍ဂျပန်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့်ပူးတွဲ၍သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲvideo (2)
Posted by yahutha at 2:50 PM0comments
ဘက်ခမ်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆို link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဖိအားပေးခံနေရ link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု သက်သေနှစ်ဦးအတွက် ရုံးချိန်းရက် အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်း link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးစားပေးလုပ်မည် link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့် ဇနီးတရားမဲ့စွာ အလုပ်ထုတ်ခံရချင်း။......။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုလိုက် ရှေ့နေကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလှမျိုးမြင့်၏ ဇနီးဖြစ်သူ
ဗဟိုသမဝါယမ အကြီးတန်း မာန်နေဂျာ ဒေါ်ခင်ခင်အေး မနေ့က အလုပ်မှ ရပ်စဲချင်း ခံရကြောင်း
သိရှိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကို ဦးလှမျိုးမြင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့် ရသည့်နေ့မှ
စ၍ ဒေါ်ခင်ခင်အေးအား သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး မနေ့က အလုပ်မှ ရပ်စဲခဲ့ကြောင်း
ထိုမတရားမှုအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ယနေ့သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးလှမျိုးုမြင့် မှမိမိအတွက် အရေး
မကြီးကြောင်းပြောဆိုသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတာကိုသိအောင်
ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု သိရှိရပါသည်။.......။
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကို မထိခိုက်စေလိုဟု စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ပြော link
ယနေ့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲ မှ ညနေ၄နာရီ အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ဒေါ်ဝင်းမမ
တို့အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ၄ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း
NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း မှပြောပါသည်။
အဓိက အရေးကြီးဆုံး သက်သေ ၃ယောက် ကိစ္စအားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဥပဒေအရ
လိုအပ်သလို ပြဿနာကို လမိးဆုံးထိ ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ပွဲ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ။....။
DAW SUU 64
Posted by Peaceful Walking at 12:39 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စစ်သံရုံးရှေ့ တဦးချင်းဆန္ဒပြပွဲ ( ကိုရီးယား )
Posted by Peaceful Walking at 12:27 AM0comments
စစ်အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၄၀၀၀ ခန့် ထွက်ပြေးလာဟု KNU က ပြော link
မြန်မာစစ်အစိုးရကို အရေးယူကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံ ဆုံးဖြတ် link
နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုကို မြန်မာစစ်အစိုးရ နားထောင်သင့်ကြောင်း ဂျပန်အစိုးရ ပြောဆို link
ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ဓာတ်ပုံ ဖြန့်ဝေရေးလှုပ်ရှားမှုများ link
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိက္ခာကျစေမယ့် ပုံတွေ ဖြန့်နေ link
Posted by yahutha at 6:30 PM0comments
ဖင်ကြွဖို့ကိုတောင် ရင်လေးနေရတဲ့ ဘဝ
သာပါစ မာပါစ လို့ မေးရမှာတောင်ရွံရှာမိရ..။
မကြည့်ပဲ မြင်နေရတဲ့ မျက်စေ့ကိုဖောက်ထုတ်
ကြားရတဲ့ ကိုယ့်နားကိုတောင် စက်ဆုပ်ရပြန်ရဲ့...။
မရှုရက်ပါပဲ နှာခေါင်းဝမှာ တိုးတိုးလာတဲ့
သမိုင်းဟောင်းက သွေးစက်တို့ရဲ့ ရနံ့မှာ
အနီရောင်အလံကို ပိုတောက်စေမယ် အမေ...။
ကျွန်မတို့အလံကို ပိုမြင့်အာင်မြှင့်မယ် အမေ...။
ကျွန်မတို့ချွေးနဲ့ အလံကိုလွှင့် လေမှာဝင့်လို့
အမေ့မွေးနေ့မှာ ကတိထပ်ပြုတယ် အမေ...။
Posted by yahutha at 6:28 PM0comments
-နစက တပ်ဖွဲ့များ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မူကြောင့် ဘင်္ဂလီငါးဖမ်းသမား (၁၁) ဦး ဒဏ်ရာရ link
- စစ်တွေတွင် လေယာဉ်ပြေးလမ်းချော်သွား၍ လေယဉ်မှူးနှင့် ခရီးသည်အမျိုးသမီးငယ်တဦး ဒဏ်ရာရ link
- လက်နက်ကိုင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို ပေါကြွယ်စရိတ်အဖြစ် လစာတိုးပေး link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအသစ်များ စတင်ပြုလုပ် link
E Bulletin52009
Publish at Scribd or explore others: Poetry Research Brochures & Catalogs Magazines & Newspape Illustrations & Maps democracy burmese
စစ်အုပ်စုဘက်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် လုံခြုံရေးများ အရှိန်မြှင့် ပြင်ဆင်နေ link
- နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုပပျောက်ရေး မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ တိုက်တွန်း link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချလျှင် ရွေးကောက်ပွဲပျက်နိုင်ဟု ဦးဝင်းတင်ပြော link
- စစ်အစိုးရတရားစီရင်ရေး မျှတမှုမရှိဟု ရှေ့နေများဝေဖန် link
- မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အချင်းမများရန် ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သတိပေး link
- သက်သေပယ်ချခံကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ တိုင်းတရားရုံး ပြင်ဆင်မှုဖွင့် link
- John Yettaw ရဲ့ ဘဝတစိတ်တပိုင်း link
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို link
ဒလမြို့နယ်ရှိ ဓနုတ်စေတီကြီး ပြိုကျ၊ လူ (၅၀) ကျော် ဒဏ်ရာရ၊ မြေပိသေဆုံးသူများကို ရှာနေဆဲ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိသားစု ကိုးကွယ်ပြုပြင်ထားသည့် စေတီပြို၍ ထိခိုက်သေဆုံးကြရ ဖတ်ရန်
- ဓနုတ်စေတီ သတင်းအမှောင်ချ၊ နိမိတ်ဆိုးဟု သုံးသပ် ဖတ်ရန်
- ဒလမြို့နယ်ရှိ ဓနုတ်စေတီကြီး ပြိုကျ၊ လူ (၅၀) ကျော် ဒဏ်ရာရ၊ မြေပိသေဆုံးသူများကို ရှာနေဆဲ ဖတ်ရန်